Apple Pay amin'ny tranonkala dia tonga miaraka amin'ny macOS Sierra | Avy amin'ny mac aho
Andro lehibe ho antsika izay nampiasa Mac nandritra ny taona maro androany ary tonga anio tolakandro ihany, ilay macOS vaovao Sierra, ilay rafitra vaovao noforonin'i Apple hampiasaina amin'ny solosaintsika. Ankoatry ny vaovao rehetra izay holazainay momba ny rafitra ihany, iray amin'ireo zavatra nambara tamim-pankasitrahana lehibe ny fahatongavan'ireo Apple Pay amin'ny Mac.
Eny, tonga ny rafitra fandoavam-bola amin'ny finday macOS Sierra fa tsy araka ny noeritreretinay azy. Tsy mampahazo aina tanteraka ny mitondra ny Mac amin'ny telefaona iray hanohizana ny fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny Apple Pay. Araka izany, Apple dia namorona Apple Pay amin'ny tranonkala.
Ity dia fomba vaovao hampiasana Apple Pay amin'ny tranonkala. Amin'izany fomba izany, rehefa mampiditra pejy iray izay ilantsika mandoa vola isika dia hanana ny safidin'ny Apple Pay amin'ny tranokala misy ka rehefa tsindrio io dia angatahina isika andao isika hanamarina amin'ny Touch ID an'ny iPhone na amin'ny Apple Watch.
Izy io dia fomba tena tsotra iray izay ahafahan'ny mpanjifa mividy amin'ny Internet aloa amin'ny Apple Pay. Ireo izay tonga dia ampandrenesina fa efa misy fifanarahana amin'ireo tranonkala an-jatony hanaiky ny fananana ny Apple Pay amin'ny bokotra web. Tsy isalasalana fa zava-baovao izay horaisina tsara indrindra any amin'ireo faritany misy Apple Pay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Apple Pay amin'ny tranonkala dia tonga miaraka amin'ny macOS Sierra